ဘားအံ့မြို့၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နှင့် သံတောင်မြို့တွင် တတိယအကြိမ် သက်မွေးပညာကျောင်းသင်တန်းဆင်းပွဲပြုလုပ် | Local Resources Centre
ဘားအံ့မြို့၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နှင့် သံတောင်မြို့တွင် တတိယအကြိမ် သက်မွေးပညာကျောင်းသင်တန်းဆင်းပွဲပြုလုပ်
Khaing Pwint Aung Monday, September 16th, 2019
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကျွမ်းကျင်မှုအတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဥ◌်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော ကျေးလက်အခြေပြု သက်မွေးပညာသင်တန်းလုပ်ငန်းစဥ◌်၏ စီမံကိန်းဒုတိယပိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ကာလ တွင် တတိယအကြိမ်ပို့ချသော သက်မွေးပညာသင်တန်း သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနားကို ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘားအံ့မြို့၊ ကြားအင်းဆိပ်ကြီးမြို့၊ သံတောင်မြို့နှင့် မြဝတီမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလှိုင်လ၊ ၂၀၁၉ တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့နှင့် တစ်ကွ Swisscontact မှဉီးဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဘားအံ့မြို့တွင် တတိယအကြိမ်ပို့ချပေးသော သင်တန်း (၇) မျိုးဖြစ်သည့် ပန်းရံသင်တန်း (အခြေခံဆောက်လုပ်ရေးပညာ)၊ ရေပိုက်ပြင်ပိုက်ဆက်သင်တန်း၊ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သင်တန်း၊ ကျေးလက်စက်ပြင်သင်တန်း၊ အရောင်းစာရေးသင်တန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်းနှင့် ဆံပင်၊ မိတ်ကပ် အလှပြင်သင်တန်းတို့တွင် သင်တန်းသူ၊ သား (၁၂၁) ဉီးအောင်မြင်စွာတတ်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့အတူ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးတွင် ပို့ချပေးခဲ့သော သင်တန်း (၂) မျိုးဖြစ်သည့် စက်ချုပ်သင်တန်းနှင့် ကျေးလက်စက်ပြင်သင်တန်းတွင် သင်တန်းသား၊ သူ စုစုပေါင်း (၄၀) ဉီး၊ မြဝတီတွင်ပို့ချပေးခဲ့သော သင်တန်း (၂) မျိုးဖြစ်သည့် စက်ချုပ်သင်တန်းနှင့် အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သင်တန်းမှ သင်တန်းသား၊ သူ စုစုပေါင်း (၃၉) ဉီးနှင့် သံတောင်မြို့တွင် ပို့ချပေးခဲ့သော သင်တန်း (၂) မျိုးဖြစ်သည့် ဆံပင်မိတ်အလှပြင်သင်တန်းနှင့် ကျေးလက်စက်ပြင်သင်တန်းတွင် သင်တန်းသား၊ သူ စုစုပေါင်း (၄၀) ဉီးသည် အောင်မြင်စွာတတ်ရောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပွဲများသို့ swisscontact နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၊ လွှတ်တော်အဖွဲ့၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ INGO များ နှင့် ကျောင်းသား မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူများမှ တတ်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
Batch (3) Closing ceremony of Vocational Skills Development Programme’s Local Voactional Training Component was held respectively at Hpa-an, Kyarinseikgyi, Myawaddy and Thandaung on 26th, July, 2019. At Hpa-an, (121) learners from seven courses: Mason (Basic Constrcution), Plumber, House Wirier, Rural Mechanic, Sales Clerk, Tailor and Beautician successfully completed their trainings. Meanwhile, (40) learners from Kyarinseikgyi’s Rural Mechanic and Tailor courses, (39) learners from Myawaddy’s House Wirier and Tailor courses and (40) learners from Thandaung’s Rural Mechanic and Beautician courses successfully completed their trainings. Responsible persons from Swisscontact and LRC, Kayin Government, Parliament, local authority, INGO, NGO, CSOs and parents/ gurdiances of learners celebrated VSDP’s LVT Batch (3) closing ceremony.